Khayaanada, Qashinka, iyo Xadgudubka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta > Khiyaano, Qashin, iyo Xadgudub
Iska ilaali calaamadaha digniinta ee khiyaanada daryeelka caafimaadka, qashinka, iyo xadgudubka.
Waad Caawinkartaa Kahortaga Khiyaanada Daryeelka Caafimaadka.
Ururka Daryeelka Caafimaadka Qaranka ee La Dagaalanka Musuqmaasuqa ayaa ku qiyaasaya in qasaaraha maaliyadeed ee ka dhasha khiyaanada daryeelka caafimaad uu yahay qiyaastii $ 100 milyan maalintii. Community Health Plan ee Washington waxaa ka go'an inay sameyso wax walba oo aan kari karno si looga hortago, loo ogaado, loona saxo khayaanada daryeelka caafimaadka. Markaad ka warbixiso xaalad laga yaabo inay noqon karto khiyaano daryeel caafimaad, waxaad sameyneysaa qaybtaada si aad uga caawiso inaad lacag u keydiso nidaamka daryeelka caafimaadka.
Waa maxay Khayaanada Daryeelka Caafimaadka, Qashinka iyo Xadgudubka?
Been-abuur waxay dhacdaa marka qof si og oo ula kac ah u soo gudbiyo sheegasho been ah oo keenta lacag-bixinno aan habboonayn.
Tusaalooyinka: Biilasha adeegyada aan la bixin, been abuurka baaritaanka bukaanka si loogu caddeeyo habraacyada aan loo baahnayn, ama aqbalida dib-u-celinta ee loogu talagalay gudbinta bukaanka.
qashinka si xad dhaaf ah loogu isticmaalo adeegyada ama dhaqamada kale ee, si toos ah ama si aan toos ahayn, u keenaya kharashyo caafimaad oo aan loo baahnayn. Tan waxaa ka mid ah ku takrifalka kheyraadka oo aan guud ahaan loo aqoonsaneyn fal dambiyeed dayacaad ah.
Tusaalooyinka: Dalbashada baaritaannada ogaanshaha cudurka ee xad-dhaafka ah, xad-dhaafka ah ee booqashooyinka xafiiska, ama farmashiyaha u diraya daawooyinka xubnaha iyaga oo aan xaqiijin inay weli u baahan yihiin.
Xadgudubka waa ficil keeni kara kharash caafimaad oo aan loo baahnayn. Marka qof ama hay'ad si kama 'ah ama ula kac ah u been uga sheego xaqiiqda si loo helo lacag bixin, tani waa xadgudub.
Tusaalooyin: Lacag-bixin xad-dhaaf ah oo loogu talagalay adeegyada ama sahayda, bixinta adeegyo caafimaad oo aan loo baahnayn, ama u tag dhakhaatiir kala duwan ama qolalka gurmadka si loo helo dawada xanuunka.
Ka warbixi khayaanada iman kara
Markaad ka warbixiso xaalad khiyaamo dhici karta, waxaad gudaneysaa qaybtaada si aad u horumariso nidaamka daryeelka caafimaadka. Haddii aad ka shakisan tahay wax isdabamarin, qashin, ama xadgudub, waxaad noogu soo sheegi kartaa khadka tooska ah:
Ama emayl, mail, ama fakis:
Warbixinta Khayaanada ee laga yaabo
Kheyraadka Si Aad Inbadan Ka Baro
Ururka Daryeelka Caafimaadka Qaranka ee La Dagaalanka Musuqmaasuqa (NHCAA)
HHS Xafiiska Kormeeraha Guud
Phone: 1-800-HHS-TALO (1-800-447-8477) ama TTY 1-800-377-4950